Britney Spears anoudza mutongi kuti Baba vakamutumira kunzvimbo yehutano hwepfungwa achipesana nezvaanoda - Nhau
Britney Spears anoudza mutongi kuti Baba vakamutumira kunzvimbo yehutano hwepfungwa achipesana nezvaanoda
Chirevo chitsva chinodaro Britney Spears anoda kugumisa kuchengetedza uko kunodzorwa uye kutungamira hupenyu hwake kwemakore gumi nerimwe apfuura pakati pekupomedzerwa kutsva kuti baba vake, vanozvitarisira, vatora zvinhu zvakanyanya.
Asingasviki vhiki nhatu dzakapfuura - sezvaakagadzirira kupedzisa zvakataurwa nhepfenyuro dzakapararira kugara kwemwedzi-mumwe kunzvimbo yekurapa pfungwa - anetseka pop nyeredzi akaita Instagram vhidhiyo maari akavimbisa 'imi mose mune hanya neni' kuti aive akanaka. 'Zvakanaka. Mhuri yangu yanga ichipfuura nekuwanda kwekushushikana nekushushikana nguva pfupi yadarika, saka ini ndaingoda nguva yekutarisana. Asi usazvidya moyo, ndichadzoka nekukurumidza, 'Britney akaudza kamera.
Iye adzoka kumba izvozvi - asi ikozvino TMZ arikuzivisa kuti mudare redzimhosva rakavharwa muna Chivabvu 10, Britney akajekesa kumutongi kuti anoda kusununguka pazvipingamupinyi zvekuchengetedzwa izvo zvakatungamirwa nababa vake, Jamie Spears kubvira paakakanganiswa pfungwa muna 2008.
Britney, ane ruzivo neruzivo akaudza TMZ, akaudza mutongi kuti Jamie 'akamupa kuchipatara chepfungwa mwedzi wapfuura achipesana nekuda kwake uye akamumanikidzawo kushandisa zvinodhaka,' webloid yakanyora. TMZ inowedzera kuti gweta raamai vaBritney, Lynne Spears, akataura zvakafanana.
tyler kubva kune vechidiki amai instagram
Sekureva kweTMZ, kunyangwe Jamie - anga achirwara zvakanyanya mushure mekurwadzwa nekoloni mukupera kwa2018 - achitungamira kuchengetedza pamusoro pemwanasikana wake, haana simba rekumuisa kuchipatara kana kumuita kuti atore zvinodhaka pasina mvumo yake. TMZ inoenderera mberi ichitsanangura kuti 'nzvimbo yehutano hwepfungwa iyo yaigamuchira murwere mukuru zvichipesana nekuda kwemurwere iye kana muchengeti asina simba rakadai anenge achipara mhosva.' (Britney akasiya nzvimbo iyi kakati wandei panguva yekugara kwake, achinzi aite bvudzi rake uye kuti apedze nguva nemukomana Sam Asghari pazororo reIsita.)
Mishumo yakapararira yakaratidza kare kuti Britney akapinda munzvimbo yehutano hwepfungwa mukupera kwaKurume kana kutanga kwaKubvumbi mushure, sekutaura kunoita TMZ, 'akarega kutora mishonga iyo yakamuchengetedza mushure mekunge varega kushanda.' Vanachiremba, TMZ inotsanangura, kusvika parizvino vatadza kuwana musanganiswa mutsva wemushonga unoshandira mumhanzi superstar.
Mifananidzo Ethan Miller / Getty Images
Mutongi haana kupa Britney 'chikumbiro cherusununguko rwakawanda muna Chivabvu 10, TMZ uye ' Varaidzo Manheru 'yakashuma, asi panzvimbo pezvo yakasarudza kuti nyanzvi yakazvimirira ichaongorora nyeredzi. Zvitoro izvi zvakaburitsa pachena kuti izvo parameter zvichagadzwa naJamie uye gweta rakasarudzwa nedare. Zvichakadaro, iyo yekuchengetedza inoramba iri munzvimbo.
Maererano ne TMZ uye 'ET,' amai vaBritney vaive mudare mukuyedza kuwana ruzivo rwekurapa kwaBritney kuti azive zvaiitika. Iye anga asiri, zvakadaro, achitsvaga kuve co-conservator pamusoro pemwanasikana wake, saiti yakatsanangurwa. (Lynne naJamie vakarambana muna 2002, zvinonzi vakayananiswa makore akazotevera ndokuzopatsanurana zvakare.)
jada pinkett smith bhikini mapikicha
'ET' yakashuma kuti inotevera chinzvimbo chinzwikwa munhau yaBritney chichaitika musi waGunyana 18.
Ko Jonathan Rhys Meyers akaroora pachivande rudo rwenguva refu Mara Lane?
Jill Zarin akatamira mune swanky NYC pad nemukomana
ndiani khloe kardashian na
ndiani josh lucas kudanana
mufananidzo waChristina el moussa mukomana
jeff lewis anobhadhara vashandi vake chii